फुटबलसहित चार खेलको टिकट मूल्य तय,विमल, अन्जन र दिनेश दर्शक मात्र ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अन्तर्गत फुटबलसहित चार खेलको टिकट मूल्य तय गरेको छ।
राखेपले फुटबलसहित भलिबल, बास्केटबल र क्रिकेट खेलका लागि टिकट निर्धारण गरेको हो। सागमा फुटबल हेर्न साधारण प्यारापिटतर्फ ५ सय र भिआईपी प्यारापिटतर्फ हजार रुपैयाँ टिकट मूल्य निर्धारण गरिएको छ।
यस्तै, भलिबल र बास्केटबलको टिकट मूल्य ५ सय राखिएको छ। क्रिकेटको टिकट मूल्य २ सय देखि ५ सयसम्म पर्ने राखेपले जनाएको छ। क्रिकेटको समूह चरणको खेलका लागि २ सय र सेमिफाईनल र फाईनलका लागि ५ सय टिकट मुल्य रहने राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले जनाए।
अन्जन र दिनेश दर्शक मात्र !
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कारबाही गरेका खेलाडीले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) खेल गुमाउने भएका छन् ।
कारबाहीमा परेका विमल घर्ती मगर, अन्जन विष्ट र दिनेश राजवंशीले घरेलु भूमिमै हुने सागमा सहभागी हुन नपाउने भएका हुन् ।
उनीहरुको स्थानमा राजेश परियार, प्रिजन तामाङ, राजिब लोप्चाङलाई टिममा बोलाइएको छ ।
कुवेतविरुद्धको खेलका लागि भुटान जानुभन्दा ठिक अघिल्लो दिन विमल, अञ्जन र दिनेशले रातभर क्लबमा बिताएको भन्दै कारबाहीस्वरुप टिमबाट हटाइएको थियो ।
त्यसपछि सागका लागि उनीहरुका बारेमा के हुन्छ भन्ने चर्चा भइरहेका बेला टिमका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले टिममा रहेका तीन खेलाडीको स्थानमा राजेश परियार, प्रिजन तामाङ र राजिव लोप्चाङलाई बोलाएको बताए। तर यस विषयमा एन्फाले भने आधिकारिक धारणा निकालेको छैन ।
साग फुटबलमा नेपालसहित बंगलादेश र भुटान समूह ‘ए’ मा छन्। भारत, माल्दिभ्स र श्रीलंका समूह ‘बी’ मा परेका थिए। यद्यपी भारतीय टिमले साग नखेल्ने बताइएको छ। नेपालले मंसिर १५ गते उद्‌घाटन खेलमा बंगलादेशसँग खेल्ने कार्यक्रम छ।